मंगलवार दोहोरो अंकले घटेको बजारमा चार कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि - Aarthiknews
काठमाडौं । मंगलबार १७ दशमलव ७९ अंकले घटेको बजारमा चार कम्पनीको शेयरमूल्य भने ९ प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि भएको छ । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स , युनाइटेड फाइनान्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयरको मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि भएको हो ।
गुराँस लघुवित्तको शेयर मूल्य १ हजार ५४४ अंकमा पुग्दा ९.९७ अंकले बढेको थियो । त्यस्तै, प्रभ् लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर पनि ९.९४ अंकको सकारात्मक वृद्धिसँगै ३ सय ५६ अंकमा पुगेर बन्द भएको छ । त्यस्तै युनाइटेड फाइनान्सको पनि ९.८८ अंकले वृद्धि भएको छ भने एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको शेयर ९.७६ अंकले बढेर बन्द भएको छ ।
यो दिन सर्वाधिक मूल्य बृद्धि गुराँस लघुवित्तको भएको छ । ९ दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता रू. १४० ले यस बढेर कम्पनीको अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ५४४ पुगेको हो । त्यस्तै यो दिन प्रभु लाइफको प्रतिकित्ता रू. ५२, युनाइटेड फाइनान्सको प्रतिकित्ता रू. ३२ र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयरको मूल्य प्रतिकित्ता रू. २९ ले बढेको हो ।